Akawanda Sei Blog Zvinyorwa? | Martech Zone
Wednesday, May 28, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Mubvunzo unonakidza wakabvunzwa kwandiri nhasi uye ndaida kugovana nawo imi vanhu kuti muwane pfungwa dzenyu. Pane here nzira iri nyore yekuudza kuti mangani mablog mablog emunhu ane?
ne WordPress, zviri nyore (pamwe zvakapusa). Kuputira yega yega positi ndeye div nePost ID Iyo Post ID inoitika yakafanana nenhamba yemapositi. Thanks autonumber! :). Ndiri kushamisika zvishoma kuti izvi hazvisi obfuscated zvishoma.
Ehe, izvi hazvitore pakufunga nezvezvakatumirwa iwe, asi fungidziro iri padyo.
Nemitambo yakapihwa blogging, senge Blogger, zvinoita zvisingaite sezvo iyo POSTID yakapihwa pamablog ese:
Imwe yedzakareruka nzira dzandinoshandisa ndeyekungotsvaga saiti paGoogle. Iwe unogona kuputsa gore uye mangani mamaposi akasarudzika mukati megore:
Kukumbira ruregerero kuna Paul Dunay (great Kushambadzira podcasts!) kufanoita. Ini ndinogona kutaura nekutsvaga, ndichishandisa gore, kuti Paul ane mazana 125. Aive nemakumi mashanu gore rapfuura uye makumi matatu nemaviri kusvika ikozvino muna 50. Rudzi rwekunyara, huh?
Une chero nzira dziri nyore uko iwe kwaunogona kuudza iyo nhamba yezvinyorwa pane blog kune mamwe mapuratifomu?
Tags: clipyncpr kugoverasyncronousTechnographic TargetingWordPress sei
Kubloga hakuna kukwana, "Dzvanya Nyama"!
May 29, 2008 pa 6: 54 AM
Unogona kugara uchimhanyisa rairo yeLynx kuburikidza nechishandiso chekuraira kuti ubudise zvese zvinongedzo zvakawanikwa wozozvipa pombi wc -l.
Kinda senge kushandisa sando kusunda muchigunwe. 🙂
Mangwanani angu kuseka ndisati ndarara pa keyboard yangu, Barbara
May 29, 2008 pa 7: 25 AM
Yakakura posvo uye mukuru mubvunzo Doug
Zvinoita sekunge ini zvirinani ndinowana cranking pane yangu blog!
May 29, 2008 pa 7: 29 AM
Ini ndaida yakanaka blogger-yakavakirwa blog semuenzaniso uye yako yaive yepamusoro pefungwa.
Izvo hazvisi nezve huwandu - mhando yemapositi ako uye iyo nguva yaunotora kugadzirisa nekuzvitumira zvinoonekwa!
May 29, 2008 pa 8: 09 AM
Kana - uye ndinoziva kuti handina mhinduro dzakanaka senge kutsvaga kweGoogle nemirairo yakakosha yeLynx - unogona kungotarisa pazvinyorwa zvinoratidza huwandu hwemapositi pamwedzi wega wega / gore, wozvizadza nepenzura nebepa. 😀
May 29, 2008 pa 7: 52 PM
pinda Douglas Karr: Cyber-Stalker!
Ingori katsamba, kune zvikonzero zvinoverengeka MySQL inogona kusvetuka autonumber saka iyo nhamba yepositi ndiyo yepamusoro mukana, kwete iyo chaiyo nhamba. Chete FYI.
May 29, 2008 pa 10: 11 PM
Kubata kwakanaka Doug, ini ndakanga ndisina kuziva kuti iwe unogona kutsvaga nenzira iyi - zvakareruka futi!
Kana iyo blog yakavanza zvinongedzo kune iyo dura uye ini ndoda kuyedza kana iri bhurogu nyowani nyowani kana kwete (kana ingori spam blog ine mashoma mashoma mapositi), ini ndinowanzo dzvanya iyo RSS bhatani mune yangu firefox browser kutarisa iyo feed . Sezvo default yeWordPress RSS zvinyorwa zviri gumi (uye kazhinji zvinosiiwa zvisina kubatika), chero zvishoma zvakatumirwa pane izvi pane feed zvinowanzo kundiudza iyi iri bhurogu nyowani (uye mazhinji spam mablog achiri ne 'hello nyika' ipapo sekutanga post).
Kusaziva zvachose ndinoziva. Pfungwa dziri pamusoro idzi dzinonyanya kubatsira!